स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन
स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन - सूर्य थापा
पहिलो विजेता : पहिलो शक्ति
२०७४ असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम आइसकेको छ । कुल ३ प्रदेश र ३५ जिल्लाका ३ सय ३४ तहमा भएको यस निर्वाचनमा प्राप्त परिणामले नेकपा (एमाले) १ सय ५१ तहको नेतृत्वमा विजयी भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेस १ सय २२ र माओवादी केन्द्रले ३८ तहको नेतृत्व प्राप्त गरेका छन् । पूर्ववत् अनुमान, अपेक्षा र आ“कलनअनुरूप नै प्रदेश १, ५ र ७ गरी तीनवटा प्रदेशमा यसपालि नेकपा (एमाले) ले अरू सबै राजनीतिक दलहरूभन्दा बढी तहको नेतृत्व र जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित गर्ने सफलता हासिल गरेको छ ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले ‘कब्जियत’ शैली र किस्ता–किस्तामा अत्यन्तै अप्ठ्यारो र द्विविधा प्रदर्शन गरेको विदितै छ । पहिलो चरण (वैशाख ३१) मै एकसाथ सम्पन्न हुन सक्ने सम्भव स्थिति हु“दाहु“दै जेठ ३१, असार ९ र असार १४ का मिति तय गर्दै÷सार्दै अन्ततः रोपाइ“ दिवसको अघिल्लो दिन असार १४ गते दोस्रो चरणको निर्वाचन गरियो । यो हरहिसाबले निर्वाचनका लागि उपयुक्त मौसम, समय र दिन थिएन । नागरिकको घरमा बिरामी वा मृत्युको स्थिति हु“दासमेत ‘शव ढाकेर रोपाइ“ गर्ने बेला’मा सरकारले निर्वाचनको दिन तोकेको थियो । तैपनि मतदाताहरू अत्यन्तै जागरुक बनेर २० वर्षपछि भएको निर्वाचनमा सक्रिय सहभागी हुन पुगे । ७० प्रतिशत हाराहारीमा मतदान हुनु आफै“मा ऐतिहासिक दृष्टान्त थियो ।
निर्वाचन परिणाम अपेक्षाअनुरूप नै नभए पनि नेकपा (एमाले) को पक्षमा आएको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको पक्षमा सरकारमा हु“दा या नहु“दा हरेक भूमिकामा नेतृत्वदायी र खरो रूपमा उत्रिएको हुनाले यसपालि जनलहर नेकपा (एमाले) को पक्षमा देखापरेको थियो । त्यसलाई बिथोल्न र बिगार्न अनेकथरी गठबन्धन र अवरोध, षड्यन्त्र र धा“धली अनि हिंसा र आक्रमणको सहारा लिएर सत्ताधारी गठबन्धन कसिलो मोर्चाबन्दीका साथ मैदानमा उत्रियो । तर जनता÷मतदाता साथमा दृढ भएपछि अरू कसैको केही लागेन । नेकपा (एमाले) ले पहिलो चरणमा कायम गरेको पहिलो विजेताको हैसियतलाई निरन्तरता दि“दै दोस्रो चरणमा आइपुग्दा पुनः पहिलो शक्तिका रूपमा आफ्नो हैसियतलाई निरन्तर कायम गरिछाड्यो । अनेकौ“ प्रतिकूलता, घेराबन्दी र षड्यन्त्रका बाबजुद तिनको सामना गरेर छिचोल्दै र असफल पार्दै नेकपा (एमाले)ले आफूलाई जनलहरको संवाहक, पहिलो विजेता र राष्ट्रको पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गरेको छ । २०७० सालको निर्वाचन परिणामको तुलनामा यो अत्यन्त महŒवपूर्ण सफलता, जनमतको हेरफेर र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन नै हो ।
जिल्ला तहको नेतृत्व
यस निर्वाचन परिणामलाई हेर्दा १४ जिल्लाको नेतृत्व अर्थात् जिल्ला समन्वय परिषद्मा नेकपा (एमाले) को एकल वर्चस्व कायम हुने स्थिति रहेको छ । प्रदेश १ मा नौवटा, धनकुटा, झापा, इलाम, ताप्लेजुङ, खोटाङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, उदयपुर र तेह्रथुम, प्रदेश ५ मा दुईवटा पाल्पा र गुल्मी र प्रदेश ७ मा कञ्चनपुर, डोटी र बझाङ गरी १४ वटा जिल्लामा जिल्ला समन्वय परिषद्मा पूर्ण बहुमतको सङ्ख्यात्मक उपस्थिति कायम भएको छ । पहिलो चरणको तुलनामा यो केही न्यून सङ्ख्या हो । तर के स्पष्ट छ भने पहिलो चरणमा भन्दा दोस्रो चरणमा आइपुग्दा गठबन्धन÷घेराबन्दी अत्यन्त चर्को थियो । त्यसका बाबजुद थप सात जिल्लामा नेकपा
(एमाले) पहिलो शक्तिका रुपमा उपस्थित भएको छ । यो सफलता चानचुने होइन । दाङ, कैलाली, मोरङ र प्यूठानलगायतका जिल्लामा नेकपा (एमाले) को नेतृत्व र अन्य दलको सहयोगमा जिल्ला समन्वय परिषद्को निर्वाचन र गठन हुने स्थिति छ । यसरी कुल ७५ जिल्लामध्ये ५० प्रतिशतभन्दा बढी जिल्लामा नेकपा (एमाले) को नेतृत्व कायम हुने स्थिति बनेको छ ।
कही“ गुमे ः कही“ शिखर चुमे ?
दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणामको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा के देखिन्छ भने, ‘पार्टीले पहिलेदेखि जित्दै आएका केही महŒवपूर्ण आधार यसपालि गुम्न पुगेका छन् । मेचीनगर, गौरादह, उर्लाबारी, हरै“चा, विराटनगर, बाणगङ्गा, देवदह, सुनवल, नेपालगन्ज, गुलरियाजस्ता महŒवपूर्ण महानगर÷उपमहानगर र नगरको नेतृत्व गुमाउनुपरेको छ । अर्कातिर सिद्धिचरण
(ओखलढुङ्गा), रेसुङ्गा (गुल्मी), भैरहवा ्र(रूपन्देही), शिवराज (कपिलवस्तु) र अमरगढी (डडेलधुरा) जस्ता विगतमा कहिल्यै नजितेका नगरपालिकामा पहिलोपटक शिखर चुम्ने सफलता यसपालि हासिल भएको छ । उम्मेदवारी चयन र निर्वाचन परिचालनमा उचित ध्यान पुग्दा यस्ता महŒवपूर्ण सफलता हासिल हुनसकेको स्पष्टै छ ।
तर जहा“जहा“ आन्तरिक समस्याको समाधान गरिएन, उम्मेदवारी चयनमा सहमति वा विधिको माध्यमबाट ठोस निर्णय नगरी अन्तरविरोध कायमै राखियो या विभिन्नखाले सन्तुलन मिलाएर उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दा नै माहोल निर्माण गर्न ध्यान दिइएन, त्यहा“त्यहा“ जित्ने अपेक्षा राख्दाराख्दै अनपेक्षित पराजयको अवस्था भोग्नुपरेको छ । फुङलिङ (ताप्लेजुङ), इलाम र सूर्योदय (इलाम), भद्रपुर, अर्जुनधारा, बिर्तामोड र दमक (झापा), इटहरी र धरान उपमहानगर (सुनसरी), बर्दघाट (नवलपरासी), तिलोत्तमा, बटुवल उपमहानगर, भैरहवा र सैनामैना (रूपन्देही), स्वर्गद्वारी (प्यूठान), घोराही र तुल्सीपुर उपमहानगर तथा लमही (दाङ), कोहलपुर र खजुरा (बा“के), बा“सगढी र ठाकुरबाबा (बर्दिया), टीकापुर, लम्की चुहा, घोडाघोडी र गोदावरी (कैलाली), दिपायल–सिलगडी (डोटी), भीमदत्त (डोटी), सा“फेबगर र मंगलसेन (अछाम) जस्ता सदरमुकाम र प्रमुख नगरीहरूमा नेकपा (एमाले) को विजय र वर्चस्व महŒवपूर्ण रहेको छ ।
स्थानीय तहका दुवै चरणको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले) विरुद्ध पोखरा–लेखनाथ (कास्की) र भरतपुर (चितवन) देखि नै घेराबन्दी र गठबन्धनका चुनौती तेस्र्याइएको थियो । दोस्रो चरणमा आइपुग्दा बुटवल उपमहानगरपालिकालगायत धेरै नगर र गाउ“हरूमा गठबन्धनलाई अझ बढी फराकिलो र कसिलो पार्दै नेकपा (एमाले)लाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न लक्षित गरिएको अवगतै छ । यस्ता तमाम चुनौती, निषेध, घेराबन्दी र षड्यन्त्रलाई छिचोलेर नै यो सफलता हासिल भएको छ ।
गठबन्धनविरुद्ध लड्न÷भिड्न पार्टीले स्थानीय विशिष्टताअनुरूप विभिन्न सहयोगी शक्तिहरूको खोजी गर्न ध्यान दिएको थियो । त्यसो गर्दा आफ्नो नेतृत्व र वर्चस्व कायम गर्न अन्य शक्तिलाई सहयोगी वा सहयात्रीका रूपमा लिने प्रयास असम्भव भएको हो । जहा“ यसो गरियो, त्यहा“ एक हदसम्म सफलता कायम भएको स्थिति रह्यो । तर जहा“ आफ्नो शक्तिको आ“कलन, विश्लेषण र तालमेलमा उचित ध्यान पुगेन, त्यहा“ परिणामअनुकूल हुन सकेन । कतिपय ठाउ“हरूमा त गठबन्धन वा तालमेल गरी छाडेका पद र स्थानमा पराजय हुने, अरू सबैजसो स्थानमा विजय हासिल गर्ने अवस्थासमेत बन्यो । मूलतः स्थानीय तहमा पार्टी कमिटीहरूको सक्रियता, पहलकदमी र कुशलता प्रदर्शन हु“दा÷नहु“दा नै निर्वाचनमा विजय÷पराजय कारक र परिणाम बन्न पुगे । नेतृत्व कुशल देखि“दा सफलता नै हासिल भएको छ ।
प्राप्त मतमा पहिलो
दुवै चरणको निर्वाचन परिणाम हेर्दा प्राप्त मतमा समेत नेकपा (एमाले) पहिलो लोकप्रिय पार्टी बन्न पुगेको छ । कुल मतमध्ये नेकपा (एमाले) ले २६ लाख ९८ हजार ७ सय ३६, नेपाली काङ्ग्रेसले २६ लाख ५६ हजार २ सय ७५ र माओवादी केन्द्रले १२ लाख ७५ हजार ३५ मत प्राप्त गरेका छन् । यसरी नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा नेकपा (एमाले) कुल ४२ हजार ४ सय ६१ मतले अग्रस्थानमा रहेको छ र मुलुकको पहिलो लोकप्रिय पार्टीका रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा प्रष्ट मतको तुलनामा ६ वटा प्रदेशमा मात्रै यो करिब ५ लाख मतको बढोत्तरी हो । प्रदेश नम्बर२ मा प्राप्त हुने मतपछि मात्र प्राप्त मतको कूलयोग आउनेछ । यो महŒवपूर्ण सफलता हो ।
तराईमा पहिलो हैसियत
दोस्रो चरणको निर्वाचन तराई–मधेसमा अवस्थित झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बा“के, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर गरी १२ जिल्लामा सम्पन्न भएको छ । यो तराई–मधेसका कूल जिल्लाहरूको बहुसङ्ख्या हो । परिणाम हेर्दा यी १२ वटै जिल्लामा नेकपा
(एमाले) ले सबभन्दा बढी स्थानीय तहमा नेतृत्व र वर्चस्व कायम गरेको छ । आफूलाई ‘मधेसवादी’ भनेका दलहरू अत्यन्त सानो सङ्ख्यामा विजयी भएका छन् । यो परिणाम तेस्रो चरणका लागि समेत एउटा महŒवपूर्ण स्थिति सूचक हो ।
अन्तिम चरणका लागि तराई–मधेसका आठ जिल्लाअन्तर्गत १ सय २७ स्थानीय तहको निर्वाचन बा“की छ । अहिलेको परिणामले के स्पष्ट गरेको छ भने १ सय २७ वटा स्थानीय तहको बा“की निर्वाचनमा पनि नेकपा (एमाले) कै अग्रता र वर्चस्व कायम गर्न सम्भव छ । तराई–मधेसमा फैलाइएका भ्रमजालहरू तोड्दै अन्योल र भ्रमका तुवा“लो हटाउ“दै नेकपा (एमाले) योजनाबद्ध रूपमा निर्वाचनको तयारी, परिचालन र परिणाम हासिल गर्नचाहि“ अग्रसर हुनैपर्छ । कतिपय स्थानीय अन्तरविरोधहरू हल गर्दै राष्ट्रिय माहोल र लहरलाई प्रदेश २ सम्म विस्तार गर्न ध्यान केन्द्रित गरेर नै प्रतिकूलताका बीचमा अनुकूलता सिर्जना गरी सफलता हासिल गर्न सम्भव छ । ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानमा अवरोध गरेर पूर्वनिर्धारित योजनामुताबिक सफल पार्न सम्भव नभएको’ २ नं. प्रदेशमा जनमतको समस्या होइन । योजनाबद्ध जनपरिचालन र नेतृत्वको हो । यस हिसाबले पार्टीको सिङ्गो देशको ताकत प्रदेश २ मा केन्द्रित गरेर नै पार्टीले विराट सफलता हासिल गर्नसक्ने निश्चित छ ।
प्रदेश नं २ मा अर्जुनदृष्टि
दुई चरणमा सम्पन्न ६ वटा प्रदेशको परिणामले धेरै प्रश्न, भ्रम र वितण्डाहरुको छिनोफानो गरेको छ । ‘लिम्बुवान’को दुन्दुभी सिर्जना गर्नेहरू स्वयम् लिम्बुवानमा शून्यप्रायः हुन पुगेका छन् । ‘मधेसी’ समुदायका असली ‘वादी’ भन्नेहरूको ‘मधेस’मा नै दयनीय अवस्था बन्न पुगेको छ । ‘टीकापुर’जस्ता विगतका रक्तरञ्जित षड्यन्त्रको मञ्चन भएका ठाउ“ वा भैरहवा र शिवराज (चन्द्रोटा) वा खजुराजस्ता नगरपालिकाहरूमा नेकपा (एमाले)ले प्राप्त गरेको विजय अत्यन्तै अर्थपूर्ण रहेको छ । यसको सीधा सङ्केत हो– प्रदेश २ मा पनि नेकपा (एमाले) अग्रणी शक्तिका रुपमा रहेको छ । त्यसको परिणाम प्रकट र सार्वजनिक गर्न नै नेकपा (एमाले) को सम्पूर्ण ध्यान जानु आवश्यक छ ।
तर जनमत भएर मात्रै पुग्दैन, त्यसलाई परिणाममा पु¥याउन र अभिव्यक्त गराउन सक्नुपर्दछ । त्यसका निम्ति सिङ्गो पार्टीपङ्क्तिको अर्जुनदृष्टि प्रदेश २ मा केन्द्रित गरिनु जरुरी छ । पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, नेता, पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिटब्युरो, केन्द्रीय कमिटी र निकायका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्तालाई यसै हिसाबले प्रदेश २ मा परिलक्षित र परिचालित गर्नुपर्छ । केन्द्रीय र प्रदेशस्तरीय योजना निर्माण तथा जिल्ला र स्थानीय तहस्तरीय परिचालन र कार्यान्वयनको ठोस प्रयास र जोडमार्फत नै तराई–मधेसमा विजयको सुनिश्चित माहोल सिर्जना गर्न सम्भव छ । यद्यपि नेकपा (एमाले) को लहरलाई बिथोल्न यहा“ अनेकौ“ षड्यन्त्र, रक्तपात र तिकडमको मञ्चन गर्ने सम्भावना र खतरा पनि छ । अनेकौ“ देशीविदेशी शक्ति तथा अलगाववादी र विखण्डनकारी शक्तिहरूले मूलतः नेकपा (एमाले) विरुद्ध प्रहार केन्द्रित गर्न आफ्नो सम्पूर्ण बु“ता लगाउने निश्चित छ । त्यसको प्रतिवाद र आफ्नो ठोस योजना एवम् रणनीतिद्वारा विजय हासिल गर्नु आजको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।
प्रदेश २ को परिणामले नै नेकपा (एमाले) राष्ट्रको पहिलो शक्ति बन्ने कि नबने ? यसको अन्तिम छिनोफानो लाग्नेछ । किनभने, स्थानीय तहमा पहिलो शक्ति भइसकेपछि प्रदेश र केन्द्य्रमा पनि पहिलो बन्न अझ सहज हुनेछ । तसर्थ, यो अत्यन्तै महŒवपूर्ण परीक्षा हो । यसमा सफलता हासिल गरेर नै पार्टीले निर्णायक विजय हासिल गर्न सक्दछ । र, आगामी प्रदेश तथा केन्द्रीय तहको निर्वाचनमा समेत दिग्विजय हासिल गरेर प्रदेश र केन्द्रमा बहुमतको सरकार दिने स्थिति सिर्जना गर्न सम्भव हुन्छ । गर्न सक्नेछ ।
विलम्ब प्रत्युत्पादक हुन सक्छ
प्रदेशका असन्तुष्टि र गर्नुपर्ने काम
मुलुकी अपराध संहिताका नयाँ आयामहरू
संहितासँग किन तर्सिने ?